I-3D yesicelo sokuskena i-laser yeselula iphumelela i-IF DESIGN award-Geofumadas
Epreli, 2019 GPS / Izixhobo, ezintsha
Isicelo se-Leica Cyclone FIELD I-360 iphumelele umklomelo wesibini kwi-iF DESIGN AWARD 2019.
Kanye kunye ne-Ergosign yabasebenzisi be-UX, i-Leica Geosystems ifake isicelo kwisigaba sokuxhuma. Kwiminyaka eyi-66, IF DESIGN AWARD Uye waqatshelwa njengomkhwa wokumgangatho wokwakha. Isicelo se-Cyclone FIELD i-360 sikhethwe yi-jury yamalungu e-67, ahlanganiswe neengcali ezizimeleyo ezivela kwihlabathi lonke, phakathi kwabathathi-nxaxheba be-6,375 bamazwe ase-52.
"Oku kuthathelwa ingqalelo kuyimbeko kwaye kungumsebenzi wokusebenza nzima nokuzinikela kweqela lethu ukubonelela ngamava omsebenzisi aphucukileyo," utshilo uGerhard Walter, umphathi wemveliso yeCyclone FIELD 360.
«Siye saqulunqa isicelo se-Cyclone FIELD 360 seseti eyahlukeneyo yabasebenzisi ukuqinisekisa ukuba banokufaka kwaye basebenze ngokulula nangokufanelekileyo kwidatha yabo yokuskena ye-laser«.
Isicelo sezixhobo zeselula I-Cyclone FIELD 360 yinto ebalulekileyo kwisisombululo sokubanjwa kwezinto ezintathu Leica RTC360 3D. Isicelo yakha ubuhlobo phakathi 3D data ukuhlanganiswa endle usebenzisa Leica laser lomvavanyi RTC360 nokuloga data kwi-ofisi usebenzisa software post-processing Leica Cyclone BHALISA 360. Ivumela umsebenzisi ukuqokelela, ingxelo kwaye ngokuzenzekelayo jonga imifanekiso ngaske data kwisiza usebenzisa tablet. Ngenxa yoko, inkqubo inika olunzulu entle entsimini lokubamba ekhoyo 3D nokuba kubasebenzisi bangenamava.
Uyilo olufanelekileyo lunokufumaneka kuphela ngokusebenzisana okuhle neengcali zobugcisa kunye nabasebenzisi bexesha elizayo. Sikwazile ukukubona oku kule projekthi, utshilo uToni Steimle, uMlawuli we-UX kunye noMlawuli weSiza Ergosign Zürich.
Ukufumana ulwazi olungakumbi malunga nechungechunge olutsha lwezixhobo zokwakha, tyelela https://leica-geosystems.com/field360
Ergosign Ngenye yeenkampani ezikhokelayo ze-UX eYurophu kunye neengcali ze-140 UX kwiindawo ezintandathu eJamani naseSwitzerland. Bamele ukudibanisa umdla wokubumba kunye nolwazi lobuchwepheshe, ngokusekelwe kwindlela yokwenza isayensi. Zijolise kwiimfuno zabaxhasi babo kwaye zisebenze ngentshiseko kwisisombululo esihle kakhulu se-UX.
Leica GeosystemsInxalenye ntandathu, iye yaguqula ihlabathi zemilinganiselo ukufunda phantse 200 iminyaka, ukudala izisombululo epheleleyo yabasebenzi ehlabathini lonke. Eyaziwa ngokuba ipremiyamu kunye nophuhliso kwezisombululo ezintsha, iingcali kumxube ezahlukeneyo namashishini kuquka aerospace kunye zokhuselo, ukhuselo kunye nokhuseleko, ukwakhiwa kunye mveliso, thembela Leica Geosystems semfuno zakho zonke iimveliso geospatial. izixhobo ngqo, isoftware ephucukileyo kunye neenkonzo elithembekileyo, Leica Geosystems wongeza ixabiso yonke imihla ngabo ukubumba ikamva ihlabathi lethu.
UMonica Miller Rodgers
Ifowuni: + 1-470-304-9770
Post edlulileyo«Edlulileyo Isisombululo esiphezulu seSupapap GIS 2D kunye ne3D
Post Next #BIM - Ikhosi ye-ETABS yoBunjineli boLwakhiwo-Inqanaba 1Okulandelayo "